Hlola i-Vancouver, Canada - World Tourism Portal
Hlola i-Vancouver, eCanada
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eVancouver, eCanada
Ongakwenza eVancouver, Canada
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeVancouver
Bukela ividiyo ekhuluma ngeVancouver
Hlola i-Vancouver okuyindawo enkulu yedolobha elikhulu eNtshonalanga Canada, futhi okwesithathu ngobukhulu eCanada, kunesigidi sezigidi ze-2.6. Itholakala ekhoneni eseningizimu-ntshonalanga yesifundazwe esisogwini lweBritish Columbia, yaziwa kakhulu ngobuhle bayo bemvelo obuhle, njengoba buhlanganiswe phakathi kwezintaba zoLwandle noLwandlekazi iPacific. Ihlala ibalwa njengenye yamadolobha amahle kakhulu okuhlala kuwo futhi iyindawo enhle ongayihambela.
AmaVancouverites ahlukanisa kakhulu idolobha labo laba abathathu: i-Westside, i-Eastside (noma i-East Van) nendawo yedolobha. Lokhu kuhlukana kumane nje kuyindawo: yonke into esentshonalanga ye-Ontario St yi-Westside, yonke into esempumalanga yi-East Vancouver futhi yonke into esenyakatho ye-False Creek yisikhungo sedolobha. Ngayinye yalezi zindawo inezinto ezikhangayo nezindawo ezakhelene nayo, ngakho-ke isikhathi esivumayo, hlola okuningi ngangokunokwenzeka. Izindawo ezisedolobheni laseVancouver zivame ukudidaniswa nemizi ehlukile yeNorth Vancouver neWest Vancouver. INorth Vancouver neWest Vancouver basenyakatho neBurard Inlet futhi abayona ingxenye yedolobha laseVancouver uqobo.
Isikhungo sezimali, ezitolo nezokuzijabulisa sedolobha. Inezimpawu eziningi eziphawuleka kakhulu zeVancouver nokuxhuma okulula kwezinye izingxenye zedolobha kanye neLower Mainland. Ngobuningi bendawo yokuhlala kanye nezinketho zokudlela, yindawo enhle, uma inentengo ephakeme, yokubeka indawo yakho yokuhlola idolobha.
IStanley Park kanye ne-West End
Enye yezindawo ezithandwa kakhulu ukubambelela eVancouver, ngamabhishi ayo, iStanley Park nezitolo eziningi ezincane kanye nezindawo zokudla.
Indawo yokuqala yedolobha laseVancouver. IGastown ingxube ye-kitsch, amagugu kanye ne-chic yasemadolobheni. IChinatown ingelinye lamaChinatown amakhulu eNyakatho Melika.
Iphinde yabuyiselwa umhlaba wezimboni manje ongumakhelwane bendawo abanesimanje abanokubukwa okuhle eceleni kwe-False Creek. Isifunda sisingatha imidlalo emikhulu yababukeli beVancouver futhi siyikhaya le-Athlete's Village ukusuka kuma-Olimpiki Wasebusika i2010.
IKitsilano kanye nesiqhingi saseGranville
I-Kitsilano Beach aziwa kakhulu, iziteshi zobuciko, iMarket Island Market edumile yaseGreville kanye nesitayela esihle sokuthenga emadolobheni - ikakhulukazi i-4th Avenue, i-10th Avenue neBroadway lapho izitolo zama-chain zihlangana nezitolo ezizimele ezihlukile.
Inyuvesi yaseBritish Columbia inezindawo eziningi ezihehayo, okubandakanya amasethi amabili ezingadi noMnyuziyamu odumile we-Anthropology. Eduze nasePacific Ghost Park, futhi empumalanga ePoint Grey, kukhona amabhishi amabili amakhulu, iJeriko neSpain Banks. Ikhampasi ye-UBC ibuye ibe yikhaya lolwandle oludumile lwezingubo ongazithanda, iWreck Beach.
Mt Pnandi-South Main
UMgwaqo Omkhulu uyingxenye ezayo nedolobha lobuciko eligcwele izitolo ezihlukile. Eduze nase-Queen Elizabeth Park, okuyiphuzu eliphakeme kakhulu eVancouver futhi enezingadi ezithile zamahhala.
Ipaki Yokuhweba iDrayivu-Hastings
Indawo ehlala idolobha. I-Commercial Drive yindawo ethambisayo equkethe izindawo zokudlela eziningi zohlanga nezindawo zokudlela ezihlukile.
Indawo ehlala iningi elihlanganisa izindawo ezingomakhelwane iKerrisdale, iDunbar, i-Oakridge, neMarpole kanye neShawnessness.
Lolu hlu luhlanganisa idolobha uqobo lwalo. Ukuze uthole amadlelo alo amaningi, bheka iLower Mainland.
Ngenkathi iVancouver iyidolobha elicishe liqhathaniswe, eminyakeni engaphezulu kwe-125, umlando wayo uqala kudala ngaphambi kwalokho. Abantu bomdabu baseCoast Salish (Nations Nations) bahlala kule ndawo okungenani iminyaka ye-6000, kanti uCaptain George Vancouver ogama lakhe linguVancouver wahamba ngomkhumbi enqamula eFirst Narrows e1792. Indawo yokuqala yokuhlala enhlonhlo yedolobha laliyiGranville, etholakala endaweni yanamuhla yeGastown. Ngonyaka wokuhlanganiswa kwenhlangano yaseCanada kwakhiwa i-saloon kulesi siza futhi yazala idolobha elincane lamabha nezitolo eziseduze nommbila wokuqala ogwini oluseningizimu yalokho manje okukuyo ichweba ledolobha. Ukuthengwa kwamapulangwe asezingeni eliphakeme kwabhalwa futhi kwathengiswa emachwebeni aseGastown naseMoodyville, ngaphesheya kokungena. Ezinye zezihlahla zazingamagatsha amakhulu athunyelwa kuwo China ukwakha BeijingI-Imperial Palace, futhi i-akhawunti eyodwa iyagcizelela ukuthi amanethiwekhi omoya abasebenza emhlabeni ngabe awakhiwa ngaphandle kwezihlahla zeBurrard Inlet.
Ngaphandle kweVictoria, iVancouver inesimo sezulu esiphansi kakhulu kunoma yiliphi idolobha elikhulu eCanada; ngisho nemithi yesundu ikhula lapha. Imvula enkulu eVancouver, ikakhulukazi phakathi nobusika, kepha phakathi nezinyanga zasehlobo iVancouver ithola imvula encane kunamanye amadolobha aseCanada. Ezinyangeni zasebusika zingahamba amasonto zingaboni ilanga noma usuku olomile, kepha izinga lokushisa akuvamile ukuba ngaphansi kwamakhaza ngaphansi. Izintaba zeqhwa ezisindayo zivamile ezintabeni eziseduzane, kodwa azijwayelekile edolobheni uqobo futhi ziholela ekuxakanisekeni okukhulu kwezimoto lapho iqhwa lihlangana. Ehlobo ekuqaleni kwezinsuku izinsuku ziqala ukuba namafu, ngenxa yomoya wasolwandle, kodwa iba sobala ntambama. Ngokuphikisana nedumela elimanzi likaVancouver, ngesikhathi sasehlobo empeleni kungumuzi wesibili omkhulu owomile waseCanada (ngemuva kweVictoria). Amazinga okushisa ehlobo awekho ngokweqile, isikhathi esivamile sosuku esiphakathi kukaJuni no-Agasti sizungeze i-24-25 ° C (75-77 ° F) kude nomphumela wokupholisa olwandle ngokushesha.
Kunegama elilodwa ukuchaza isimo sezulu seVancouver: okungalindelekile. Isimo sezulu singase sehluke ngokuphelele kuye ngokuthi iyiphi ingxenye yesifunda okuso. Kungakhipha imvula kwi-North Shore naselangeni e-White Rock.
IVancouver inezilimi ezimbili ezisemthethweni, isiNgisi nesiFulentshi. Iningi labantu likhuluma isiNgisi, kukodwa noma kuhlangene nolunye ulimi. Ngenxa yohlobo lobuhlanga lwaleli dolobha, abahambi bangalindela ukuzwa izingxoxo ngesiChinese (zombili isiMandarin nesiCantonese), isiPunjabi, isiTagalog nezilimi ezahlukahlukene zaseYurophu.
AmaVancouverites, njengoba bona uqobo bevuma, bayisixaka esiyinkimbinkimbi. Ngaphandle, nakwabavakashi, bangabantu abanobungane obuhle. Bajabule ukukhomba isihambi indlela efanelekile noma bancome indawo yokudlela enhle. Izakhamizi ezintsha zibathola njengeqembu elingatheni, bephuza ukwamukela abasanda kufika. Ukuze uveze enye intatheli, amaVancouverites angakuqondisa ngenjabulo endlini yekhofi; ungabaceli ukuthi bahlanganyele nawe indebe.
Isikhungo Sokuvakasha Sokuvakasha Vancouver, 200 Burrard St. 9AM-5PM. Inikeza amamephu, izincwajana kanye neminye imininingwane yabavakashi.
I-Vancouver International Airport itholakala ngokushesha eningizimu yedolobha laseVancouver. Lesi yisikhumulo sezindiza esiphambili kunazo zonke futhi sisebenza njengesikhumulo sezindiza esikhulukazi eWestern Canada ngezindiza ezihamba njalo ziya kwamanye amaphuzu eBritish Columbia, amadolobha amakhulu kulo lonke elaseCanada nase-US, e-Asia kanye nezimbalwa eziya eYurophu.
Kunezindlela eziningi zokungena edolobheni kusuka esikhumulweni sezindiza.
I-SkyTrain - ICanada Line ihlinzeka okuwukuphela kwensiza ethengisa izinto zomphakathi ngokushesha, kumizuzu engu-25.
Taxi - Amatekisi ahlangana ngaphandle nje kwezindawo zokufuna impahla. Ukugibela itekisi ukuya edolobheni kufanele kuthathe ngaphansi kwengxenye yehora. Onke amatekisi asebenza esikhumulweni sezindiza ayadingeka ukuthi amukele amakhadi wesikweletu.
I-Limousines - I-Limojet Gold inikeza izinketho ze-sedan ne-limousine ezintofontofo zokungena edolobheni. Ukugibela ukungena enkabeni yedolobha kuncike ekutheni uyaphi nokuthi uku-sedan noma i-limo.
IVancouver ingelinye lamadolobha amakhulu ambalwa eNyakatho Melika ngaphandle komgwaqo onguthelawayeka oholela ngqo ekujuleni kwedolobha (iziphakamiso zefreeway kuma1960s kanye nama1970 ahlulwa abaphikisi bomphakathi). Njengomphumela, intuthuko ithathe inkambo ehlukile kunakwamanye amadolobha amakhulu aseNyakatho Melika okuholela ekusetshenzisweni okuphezulu kakhulu kokuhamba nokuhamba ngamabhayisekili, aminyene, umfutho wokukwazi ukuhamba kanye nomfuziselo wokuthuthuka ofundelwa futhi olingiswe kwenye indawo.
Ikhadi leCompass liyindlela elula yokugcina inani lemali engasetshenziswa ukukhokhela imali yokuthenga nokudlulisa phakathi kwezinsizakalo. Ukuba nelinye lalamakhadi kunciphisa isidingo sokuthola imali ngqo yohlobo lapho ukhokha emabhasini. Ngaphezu kwalokho, lapho usebenzisa iCompass Card ukukhokhela imali, imali esetshenzisiwe ehlisiwe iyasetshenziswa. Amakhadi weCompass angathengwa emishini yokuthengisa abathengi eziteshini zeSkyTrain / SeaBus, noma kwaFare Abathengi esifundeni sonke ngediphozi engabuyiselwa engu- $ 6. Idiphozithi ingabuyiselwa eCompass Card Customer Service Center eState SkyTrain Station, noma ehhovisi laseWest Coast Express esiteshini saseWaterward Station (noma ngeposi).
Inethiwekhi yomgwaqo iVancouver imvamisa iwuhlelo lwegridi enesitaladi esine- “Street” esisebenza enyakatho-eningizimu kanye ne- “Avenue” esebenza empumalanga nentshonalanga. Imigwaqo ye-arterial ilandela igridi kahle (yize kungenjalo ngokuphelele), kepha imigwaqo eseceleni ivame ukunyamalala emabhulokini ngasikhathi bese iphinda ivele. Iningi lama “Avenues” libaliwe futhi lihlala lisebenzisa i-East noma i-West ukuqoka ukuthi lingasohlangothini lwase-East noma olungasentshonalanga kwe-Ontario Street. Ezinye zezindlela ezinkulu zisebenzisa amagama kunezinombolo (i-Broadway ibizoba yi-9th Ave, iKing Edward Ave ibe yi-25th Ave).
IDowntown Vancouver inohlelo lwayo lwegridi futhi ayilandeli ifomethi yemigwaqo / ye-avenue yedolobha lonke. Ubuye uzungezwe ngamanzi ezinhlangothini ezintathu, ngakho-ke iningi lezindlela ezingena nangaphandle zidinga ukuthi weqe ibhuloho. Lokhu kungadala ukugcwala kwethrafikhi, ikakhulukazi ngezikhathi eziphakeme kakhulu (ukuhamba kwasekuseni nakusihlwa, ukuphuma kwemini ngempelasonto, imicimbi emikhulu yezemidlalo), ngakho-ke kufinyelele kunoma yini ezinhlelweni zokushayela, noma ukugweme uma kungenzeka.
Idolobha laseVancouver liyidolobha elinomusa kakhulu ngamabhayisekili. Ngaphezu kwemizila yamabhayisekili asolwandle athandwa kakhulu eduze kweStanley Park, iFalse Creek neKitsilano, kunethiwekhi yonke yezindlela zamabhayisekili axhumanisa idolobha lonke. Idolobha laseVancouver linikezela ngemephu yezindlela zamabhayisekili ezitholakala ezitolo eziningi zebhayisekili noma online. Kulabo abahamba kancane, iVancouver nayo inama-pedicabs anikezela izinkambo zaseStanley Park. Futhi, wonke amabhasi anezikhala zamabhayisekili ngaphambili ukusiza abagibeli ukufika ezingxenyeni ezingatholakali kalula. Izivakashi zaseNyakatho Melika zizothola ukuthi abashayeli eVancouver bajwayele ukwaba umgwaqo nabahamba ngamabhayisekili.
Amabhayisikili ayatholakala ukuqasha ngehora, usuku noma isonto. Izindawo eziningi zibuye ziqashe amabhayisekili e-tandem.
Ukuqasha i-scooter kuwukuvumelana okuhle phakathi kwebhayisekili nemoto. Ama-Scooters awavunyelwe endleleni edumile yebhayisekili, kodwa kungenzeka ukuhamba emigwaqweni engaphakathi, upake futhi uhambe kuzo zonke izinto ezihehayo.
Ngenkathi iVancouver iseyidolobha elincane, inezinto ezahlukahlukene ezihehayo kanye namaphuzu athakazelisa isivakashi. Iningi lezimpawu zedolobha kanye nezakhiwo zomlando zingatholakala edolobheni. ICanada Place, ngamaseyili ayo ahlukile, iVancouver Convention Center eseduze nje kwayo, isitayela esiyinkimbinkimbi se-Art Deco seMarine wokwakha kanye nehhotela likaloliwe elidala laseHotela Vancouver lisenkabeni yebhizinisi eliphakathi. IStanley Park (ukuheha idolobha okuthandwa kakhulu), kanye nomgwaqo wokuhamba weCoal Harbour neVancouver Aquarium iseWest End naseGastown, indawo yokuqala yedolobha laseVancouver, inezakhiwo ezimbalwa ezibuyiselwe kanti iwashi layo elinomphunga liyindawo edumile ukuvakasha. Ubuciko bwanamuhla obufanele ukuvakashelwa buhlanganisa iShangri-La, njengamanje isakhiwo esikhulu kunazo zonke edolobheni, neSheraton Wall Center. Enye indawo edume kakhulu yedolobha, izimakethe ezinkulu nezitolo zaseGranville Island, kumane nje kuseningizimu yedolobha eSouth Granville.
Uma ufuna ukufunda okuncane ngabantu baseNyakatho-Ntshonalanga nangomlando waso, indawo eyodwa enhle umnyuziyamu ohlaba umxhwele wase-University of Anthropology eNyuvesi yaseBritish Columbia, onezinto eziyizinkulungwane ezimbalwa zeBDC's Nations yokuqala. Imnyuziyamu futhi iyikhaya lamaqoqo amakhulu ezinto zemivubukulo nezinto zokwenziwa kwe-ethnographic ezivela kwezinye izingxenye zomhlaba. IVancouver Art Gallery, etholakala edolobho ihlanganisa indawo yakwamanye amazwe ngokusebenzisa imibukiso ehlukahlukene kanye neqoqo laphakade eligxile kumculi odumile waseBritish Columbia, u-Emily Carr. Umtapo wezincwadi waseVancouver Public Library, ongaphakathi kwedolobha eHomer naseRobson Sts, uboniswa ngemuva kweRomansese yaseRoma, bese uhlala umtapo wezincwadi omkhulu kunayo yonke idolobha. Okunye ukubonwa kwedolobha yindawo encane yeContemporary Art Gallery kuNelson Street, enobuciko besimanje. Kuphinde kutholakale eduzane, ohlangothini olusempumalanga ye-False Creek kuyidome ecwebezelayo yeTelus World of Science (eyaziwa ngokuthi yiSayensi World), enezindawo eziningi zemibukiso, imibukiso nemipheme ehlose ukwenza isayensi ijabulise izingane. Enye indawo enhle ongabheka kuyo yi-BC Sports Hall of Fame neMnyuziyamu eseGate A of BC Place Stadium. I-BC Sports Hall of Fame neMnyuziyamu igcina futhi ihlonze ifa leMidlalo leBC ngokuqaphela impumelelo engaphezulu kwezemidlalo ngokusebenzisa ukuqoqwa kwabo nezindaba ukukhuthaza bonke abantu ukuba baphishekele amaphupho abo. Kukhona futhi nokubuka okuncane eKitsilano, kufaka phakathi iVancouver Maritime Museum, iMuseum of Vancouver, kanye ne-HR Macmillan Space Center.
Idolobha linomcebo wamapaki nezingadi ezisakazeke kulo lonke. Esidume kakhulu yiStanley Park emaphethelweni edolobha. Amamayela ayo wemigwaqo yokuhamba nokuhamba ngamabhayisekili, amabhishi, ukubukwa okuhle nokuhehayo (kufaka phakathi izigxobo ze-totem) ngaphakathi kwepaki kuyinikeza okuthile kuwo wonke umuntu. Umzila owaziwa kakhulu yiSeawall, umzila obunjiwe ojikeleza uzungeze weStanley Park futhi manje ohlanganyela namalwandle aseCoal Harbour naseKitsilano, engamakhilomitha angama-22 ubude. IVancouver Aquarium itholakala eStanley Park. Amanye amapaki nezingadi eziphawuleka zihlanganisa iVanDusen Botanical Garden eSouth Vancouver kanye neQueen Elizabeth Park eduze naseSouth Main, iNitobe Memorial Garden (eyaziwa njengeNitobe Japan Garden) ne-UBC Botanical Garden eNyuvesi yaseBritish Columbia noDkt Sun Yat- I-Sen Classical Chinese Garden eChinatown downtown.
Ukwemukelwa kokuheha okwahlukahlukene kweVancouver kungaqala kusuka ku- $ 10 kuya ku- $ 30 ngomuntu ngamunye. Kunezindlela ezahlukahlukene zokuheha ezikhona ezisiza izivakashi ukuthi zilondoloze ukwamukelwa okuthengiswa njengeVancouver Five kwi-One Card.
Ekugcineni, uhambo oluya eVancouver belungeke luphelele ngaphandle kokubuka nje kwesibhakabhaka kanye nezintaba ezisogwini ezikhuphuka ngaphezu komuzi (amafu avumela, kunjalo!). Izindawo ezidumile zokuyibuka zihlanganisa iStanley Park kanye neDolobha Lesikhungo Sokungcebeleka, Amabhange aseSpain kanye namabhishi aseJeriko ePoint Grey naseLonsdale Quay eNorth Vancouver. Eminye imibono ethokozisayo ingabonakala eCity Hall e-12th naseCambie, eVancouver LookOut tower, e-Queen Elizabeth Park nase-East Van's CRAB Park.
Yini ongayithenga eVancouver
Okufanele ukudliwe - isiphuzo eVancouver
Uma kunesimo esiphuthumayo, shayela i-9-1-1 kusuka kunoma iyiphi ifoni yomphakathi mahhala. Yaziswa-ke nokho ukuthi ngokunyuka kokusetshenziswa kwamaselula, kususwe izingcingo zomphakathi eziningi, ngakho-ke kungaba nzima ukuza (ikakhulukazi ezindaweni ezingaphansi).
Ithiphu yokuhamba enhle okufanele uyikhumbule: Ukushayela i-1-1-2 kusuka kumakhalekhukhwini ikuxhuma ngokuzenzakalela kunethiwekhi yeselula eseduze futhi ibize inombolo ephuthumayo, noma ngabe ihlangene kanjani.
Amakhofi e-Intanethi awathandwa njengangaphambili, njengoba esethathelwe indawo yi-wireless etholakala emahhotela amaningi, amathofi nezindawo zokudlela; Kodwa-ke, kuseneziningi ezizungeze indawo yaseVancouver futhi ngokuvamile zithengiswa ngentengo enengqondo.
Kulabo abalethe i-laptop, amaphuzu wama-wireless wamahhala ayiningi endaweni yedolobha, futhi insizakalo ekhokhelwe efanelekile iyatholakala nepine.
IVancouver yindawo enhle ongayivakashela uma usebenzisa umqondo ojwayelekile njengokubeka iso ezintweni zakho, ukwazi ukuthi uyaphi nokugwema ama-alleys nezindawo ongazazi ebusuku kufanele kukuvikele enkingeni. Ngaphandle kokuthi ubambe iqhaza ezenzweni ezingekho emthethweni (njengokuhweba ngezidakamizwa), kungenzeka ukuthi ungabanjwa yiluphi uhlobo lobugebengu obunobudlova. Uma udinga usizo oluphuthumayo, shayela i-911.
Uhambo lansuku zonke ukusuka eVancouver
Hlola uhambo losuku kusuka eVancouver, Canada komasipala abaningi abaseduze.